Baịbụl Ò Nwere Ike Inyere M Aka Ma M Daa Mbà n’Obi? | Ajụjụ Ndị Baịbụl Zara
GỤỌ NKE Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Assamese Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bislama Bulgarian Cebuano Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitumbuka Cibemba Croatian Czech Danish Dutch Efik English Estonian Ewe Faroese Fijian Finnish French Ga Georgian German Greek Haitian Creole Hausa Hebrew Hiligaynon Hungarian Icelandic Igbo Iloko Indonesian Italian Japanese Kazakh Kikamba Kikongo Kikuyu Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Korean Latvian Lingala Lithuanian Luganda Macedonian Malagasy Malayalam Maltese Mapudungun Myanmar Norwegian Nzema Ossetian Pangasinan Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Persian Polish Portuguese Quechua (Bolivia) Romanian Russian Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Sinhala Slovak Slovenian Spanish Swahili Swedish Tagalog Tamil Tatar Telugu Thai Tiv Tsonga Turkish Turkmen Ukrainian Umbundu Vietnamese Xhosa Yoruba Zulu
Ee, o nwere ike inyere gị aka, n’ihi na onye ga-akacha enyere gị aka bụ Chineke. Baịbụl kwuru na Chineke bụ “ onye nkasiobi nke ndị obi dara mba. ”—2 Ndị Kọrịnt 7:6, Baịbụl Nsọ: Nhazi Katọlik.
Ihe Chineke na-enye ndị dara mbà n’obi
Ike. Otú Chineke ga-esi akasi gị obi abụghị iwepụ nsogbu gị niile. Kama, ihe Chineke ga-emere gị bụ ịza ekpere i kpegaara ya ka o nye gị ike ị ga-eji die nsogbu ndị bịaara gị. (Ndị Filipaị 4:13) Obi kwesịrị isi gị ike na Jehova ga-aza ekpere gị n’ihi na Baịbụl kwuru, sị: “Jehova nọ ndị obi ha tiwara etiwa nso; ọ na-azọpụtakwa ndị e gburu mmụọ ha.” (Abụ Ọma 34:18) Chineke nwedịrị ike ịnụ mkpu ị na-eti ka o nyere gị aka, a sịgodị na ị maghị otú ị ga-esi kọwaa ihe bụ́ nsogbu gị.—Ndị Rom 8:26, 27.
Ndị anyị ga-amụta ihe n’aka ha. Otu onye so dee Baịbụl kpegaara Chineke ekpere, sị: “ Anọ m n’ime ogbu mmiri kpọkuo gị. ” Ihe nyeere onye a so dee Baịbụl aka ka ọ kwụsị ịda mbà n’obi bụ na o chetara na Chineke na-agbaghara anyị mmehie. O kwuru, sị: “ A sị na ọ bụ njehie ka ị na-ele, Jaa, Jehova, ònye pụrụ iguzo? N’ihi na ezi mgbaghara dị n’aka gị, ka e wee na-atụ egwu gị. ”—Abụ Ọma 130:1, 3, 4.
Olileanya. Ọ bụ eziokwu na Chineke na-akasi anyị obi ugbu a, o kwekwara anyị nkwa na ya ga-ewepụ nsogbu niile na-akpatara anyị ịda mbà n’obi. Mgbe ọ ga-emezu nkwa a, “ a gaghị echeta ihe mbụ niile [ma ịda mbà n’obi], ha agaghị abatakwa n’obi. ”—Aịzaya 65:17.
Ihe ị ga-eburu n’obi: N’agbanyeghị na Ndịàmà Jehova ma na Chineke na-enyere ndị dara mbà n’obi aka, ha chọpụta na ịda mbà n’obi ha aghọọla ọrịa, ha na-aga ụlọ ọgwụ. (Mak 2:17) Ma, Ndịàmà Jehova anaghị agwa onye nwere ụdị ịda mbà n’obi a otú a ga-esi agwọ ya. Ọ bụ onye ahụ ka ọ dịịrị ikpebi otú a ga-esi agwọ ya.